अर्थ/ बाणिज्य – nepakhabar
Category: अर्थ/ बाणिज्य
११ सार्वजनिक संस्थानमा लुटतन्त्र ?
टेलिकमलाई पाँच वर्षमा ५६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार, विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक १ करोड ९९ लाख थप व्ययभार काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २ सय ६५ बराबरको निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ वटा सरकारी संस्थान तथा निकायमा गरेको अध्ययनले […]
हवाई यात्रुको बिमामा ६ गुणा वृद्धि
काठमाडौं । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बिमा रकममा करिब छ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले निकट भविष्यमा उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने छ । महासन्धि अनुमोदन भएपछि हवाई यात्रुको बिमा […]
एनआइसी एसिया र रिलायन्स लाइफबीच सम्झौता
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्ससँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको जुनसुकै शाखाहरूबाट रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन बिमा पोलिसीहरू खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीले हस्ताक्षर गरे । […]
तीन हजारले अझै पाएनन् तेस्रो किस्ता
काठमाडाैँ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका भूकम्प प्रभावित करिब तीन हजार परिवारले तेस्रो किस्ता बराबरको रकम पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकालाई आवश्य पर्ने कानुनी कागजात तयार पारी बुझाउन नसक्दा करिब तीन हजारले तेस्रो किस्ता बराबरको रकम पाउन सकेनन् । ०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका कुल ३३ सय ९८ घरमा क्षति […]
विद्युत् कम्पनीका सेयरबाट प्रतिफल मुस्किल !
काठमाडौं । सेयरको मूल्यांकन गर्ने कम्पनी इक्रा नेपालले आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई ‘ग्रेड’ पाँच दिएको छ । कम्पनीले यही साउन १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई साधारण सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । गत बिहीबार मात्रै आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले साधारण सेयर बिक्रीका लागि सार्वजनिक आह्वानपत्र प्रकाशित गरेको छ । इक्रा नेपालको रेटिङमा पाँचौँ नम्बर […]
जिटुजीबाट कामदार लैजाँदै मलेसिया, २० हजारमै वैदेशिक राेजगारकाे तयारी
‘बिचौलिया कम्पनी प्रयोग गर्ने नीति अघिल्लो सरकारको भएकाले त्यसमा अहिले पुनर्विचार भइरहेको छ, सम्भवतः अर्को साता जिटुजी प्रणालीमा जाने निर्णय हुन्छ,’ मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरन काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार लैजान सरकारी तबरबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । निजी कम्पनी अर्थात् म्यानपावरबाट कामदार लैजाँदा समस्या देखिएको बताउँदै मलेसियाले सिधै सरकारबाट सरकार […]
असुली हुन सकेन क्यासिनोको सवा अर्ब
अन्तरिम आदेशको चार वर्षसम्म पनि भएन संवैधानिक इजलासबाट निर्णय: मुद्दा लम्ब्याउने खेल काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले समयमै फैसला नदिँदा सरकार झण्डै डेढ अर्ब राजस्व गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीसहितको संवैधानिक इजलासले फैसला नगर्दा क्यासिनोबाट असुल गर्नुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रोयल्टी असुली हुन नसकेको हो । ०६९ सालदेखि सरकारले क्यासिनो सञ्चालन […]
क्लासिक ममःका उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ब्रान्डको रूपमा परिचित क्लासिक ममः ले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तीन वर्षअघि राजधानीको नक्सालमा खोलिएको क्लासिक ममःले वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीमा कार्यरत १० जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ । आमा भेन्चर प्रालिद्वारा करिब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा सञ्चालित सो ममःको नक्साल, खिचापोखरी (नयाँसडक) र ठमेलको साथै भारतको बैंगलोरमा समेत आउटलेट रहेको […]
१२ क्विन्टल शंखेकीरा संकलन
ल्यान । सल्यानको एउटै गाउँमा १२ क्विन्टल शंखेकीरा संकलन गरिएको छ । जिल्लाको शारदा नगरपालिका ६ बरलामा एउटै गाउँमा १२ क्विन्टल चार किलो शंखेकीरा संकलन गरिएको हो । जाइन्ट अफ्रिकन स्नेल अर्थात्, ठूलो आकारको शंखेकीराले किसानले लगाएको तरकारीबाली, धानबाली, मकैबाली आदिमा क्षति पुर्याउन थालेपछि स्थानीय सरकारको पहलमा बरलाको करिब २० देखि २५ हेक्टरमा रहेको शंखेकीरा […]